Home Somali News Puntland:Qarax dhaawac iyo dhimasho leh oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Hal qof oo dumar ah ayaa ku dhimatay halka ay 7 qof ku dhaawacmeen qarax subaxnimadii Salaasada ka dhacay xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug aga-gaarka Isbitaalka Magaalada.
Qaraxan ayaa loo adeegsadey miino dhulka lagu aasey isla markaana laga maamuley meel ka fog halka qaraxu ka dhacay. Isbitaalka guud ee magaalada ayaa la gaarsiiyey dhaawacii qaraxa ka dhashay waxaana kamid ah qaar qaba dhaawacyo culus.
Bartimmaameedka weerarkan ayaa ahaa Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur oo ka bad baaday qaraxyadan, Gudoomiye ku xigeenka oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in aysan jirin dhaawac ka soo gaaray qaraxa isag iyo ilaaladiisa balse waxa uu sheegay in uu ka xunyahay dhibaatada soo gaartay dadka shacabka ee ku dhaawacmay.
Axmed wuxuu xusay in qaraxan uusan waxba ka dhimayn shaqadiisa oo uu sheegay in ay tahay mida lagu soo weeraray wuxuu tilmaamay in uu dhiri gelin ka sii helayo shaqadana sii gudanayo, Isagoo xusay in gacanta lagu soo dhigi doono cidii ka dambaysay qaraxyadan.
Waxaa soo gaarey halka qaraxu ka dhacay ciidamada Booliska oo baaritaano ka wada.
Magaalada Gaalkacyo ayaa bilihii u danbeeyey ka nasatey qaraxyada caynkan oo kale ah waxaana soo hagaagayey amaanka magaalada.
Somaliland: Berbera Port Boosts Zeyla Harbour